မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေ ကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေ ကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့ – Let Pan Daily
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေ ကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေ ကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့
ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာ ဖို့ပဲ လိုတာပါ … မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီးအပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန် နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေမင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား?ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား သဘာဝ လို့ မပြောပါနဲ့
အဲ့ဒီစကား တစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီးလဲကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား? အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ခြေထောက်က နဂိုကတည်းက မသန့်လို့ပဲ ဆိုတာသိထားပါ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှမချင်းစာနာတတ်တဲ့ စိတ် မရှိရင် ခွေးထက်ယုတ်ညံသွားလိမ့်မယ်…
Tattoo ထိုးမှ ယောက်ျား ပီသတယ် ထင်နေလားဆေးလိပ်/ အရက်သောက်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား..? ဗလတောင့်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား ?နောက်ဆုံးစစ်တပ်ထဲဝင်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား? တစ်ကယ် တမ်းတော့ ယောက်ျား ပီသဖို့ သူများသားသမီးကိုမယုတ်မာဖို့ပဲ လိုတာပါ…
မင်းသာ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက် ဆိုရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဘဝတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် မင်းခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တည်းခိုးခန်းအစား မင်္ဂလာခန်းမ ထဲ ပြောင်းခေါ်ခဲ့လိုက်ပါ… မင်းသာ ယောက်ျားကောင်းဆိုရင် အချစ်တစ်ခုကို ဘန်းပြပြီး သူ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်နေတဲ့ မင်းလက်ကို ရပ်လိုက်ပါ..
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်နဲ့ဘဝကိုစော်ကားဖို့ ကြိုးစားတော့မည် ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကိုယ်အမေ အစ်မ နှမ ကို ပြေးမြ င်ကြည့်လိုက်ပါ… ယောက်ျားတစ်ယောက် ကြိုက်သလောက် မိုက် လို့ရပါ တယ်ဘယ်တော့မှ မယုတ် မာမိပါစေနဲ့….။ ။
ေယာက္်ားဆိုတာ မယုတ္မာ ဖို႔ပဲ လိုတာပါ … မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ရဲ႕ တင္ ရင္ ေတြၾကည့္ၿပီးအပ်ိဳစစ္လား မစစ္လား ေဝဖန္ ေနတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေကာင္ေတြမင္းတို႔ေရာ လူပ်ိဳစစ္ရဲ႕လား?ရမလား စမ္းတာ ေယာက္်ား သဘာဝ လို႔ မေျပာပါနဲ႔
အဲ့ဒီစကား တစ္ခြန္းေၾကာင့္ မိန္းကေလးေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕အရွက္သိကၡာ နစ္နာမႈေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားၿပီးလဲကိုယ္ခ်င္းစာမိရဲ႕လား? အိုင္ေတြ႕လို႔ ေျခေဆးမယ္ ဆိုကတည္းက ကိုယ္ေျခေထာက္က နဂိုကတည္းက မသန႔္လို႔ပဲ ဆိုတာသိထားပါ… ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ႏွမခ်င္းစာနာတတ္တဲ့ စိတ္ မရွိရင္ ေခြးထက္ယုတ္ညံသြားလိမ့္မယ္…
Tattoo ထိုးမွ ေယာက္်ား ပီသတယ္ ထင္ေနလားေဆးလိပ္/ အရက္ေသာက္မွ ေယာက္်ားပီသတယ္ ထင္ေနလား..? ဗလေတာင့္မွ ေယာက္်ားပီသတယ္ ထင္ေနလား ?ေနာက္ဆုံးစစ္တပ္ထဲဝင္မွ ေယာက္်ားပီသတယ္ ထင္ေနလား? တစ္ကယ္ တမ္းေတာ့ ေယာက္်ား ပီသဖို႔ သူမ်ားသားသမီးကိုမယုတ္မာဖို႔ပဲ လိုတာပါ…
မင္းသာ ေယာက္်ားေကာင္းတစ္ေယာက္ ဆိုရင္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ဘဝတစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ မင္းေခၚသြားဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ တည္းခိုးခန္းအစား မဂၤလာခန္းမ ထဲ ေျပာင္းေခၚခဲ့လိုက္ပါ… မင္းသာ ေယာက္်ားေကာင္းဆိုရင္ အခ်စ္တစ္ခုကို ဘန္းျပၿပီး သူ အဝတ္အစားေတြ ခြၽတ္ေနတဲ့ မင္းလက္ကို ရပ္လိုက္ပါ..
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္နဲ႔ဘဝကိုေစာ္ကားဖို႔ ႀကိဳးစားေတာ့မည္ ဆိုရင္ အရင္ဆုံး ကိုယ္အေမ အစ္မ ႏွမ ကို ေျပးျမ င္ၾကည့္လိုက္ပါ… ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ႀကိဳက္သေလာက္ မိုက္ လို႔ရပါ တယ္ဘယ္ေတာ့မွ မယုတ္ မာမိပါေစနဲ႔….။ ။
တစ်ပါတ်စာ အထူးဟောစာတမ်း ဗေဒင် ဆရာဇင်ယော်နီ
အိမ် တချို့ရဲ့ အဝင်အဝ မှာ ကြည့်မှန်တွေထား ရတဲ့ အကြောင်း ရင်းမှန်
မရွိ ၍ ရွိေသာ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း” (ဖတ္ ၾကည့္ ပါ )